TextGrabber အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Scan ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » TextGrabber အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Scan ကို & စာသားမှဓာတ်ပုံ Translate
TextGrabber အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Scan ကို & APK ကိုစာသားဓာတ်ပုံ Translate
ABBYY TextGrabber အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်ပုံနှိပ်စာသားအပိုင်းအစတွေ digitizes နှင့်အရေးယူထဲသို့အသိအမှတ်ပြုရလဒ် turnes: မခေါ်အီးမေးလ်, လင့်များအတိုင်းလိုက်နာ, မြေပုံများအပေါ်ကိုရှာဖွေ, 100 + ဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ဆို, ပြင်ဆင်ရန်, မဆိုအဆင်ပြေလမ်းအတွက်ကျော်နှင့်ရှယ်ယာ voice ။
သငျသညျပုံနှိပ်စာသားကိုမှာသင့်မိုဘိုင်းကင်မရာထောက်ပြသောအခါ, TextGrabber ချက်ချင်းဖမ်းယူခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းကအသိအမှတ်ပြုမရှိအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကမူထူးခြားတဲ့ Real-time အသိအမှတ်ပြုမှု mode ကိုစာရွက်စာတမ်းများထဲကနေပေမယ့်မဆိုမျက်နှာပြင်ကနေမသာ 60 + ဘာသာစကားများသတင်းအချက်အလက် extracts ။ က "မိုဘိုင်း Productivity App ကို" တွင် Superstar Award ဆု "မိုဘိုင်းပုံရိပ်ဖမ်းယူမှု App ကို" နှင့် "စာသား Input ကို" ၏ ***** Winner မိုဘိုင်းစတားဆုပေးပွဲအတွက်အမျိုးအစားများ
အဆိုပါအိုငျးရစျ Times က - "တစ်ဦးစကင်နာ TextGrabber ဖြစ်ကောင်းသင့်ဖုန်းသည်အခြား function ကိုဖြည့်စွက်ထားသည့်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်"
"အကောင်းဆုံးကို Image-to-စာသား App ကို ... " - lifehacker.com
•အချိန်နှင့်တပြေးညီဘာသာပြန်စာပေတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်း 100 + ဘာသာစကားများသို့ဓာတ်ပုံများယူပြီးမပါဘဲကင်မရာမျက်နှာပြင် (Full-စာသားကိုဘာသာပြန်ချက်) နှင့် 10 ဘာသာစကားများအော့ဖ်လိုင်း (စကားလုံး-by-စကားလုံးဘာသာပြန်ချက်) ပေါ်မှာ။
• ABBYY RTR SDK ကိုနည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. ဆန်းသစ်သောအချိန်နှင့်တပြေးညီအသိအမှတ်ပြု mode ကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်ယူမပါဘဲကင်မရာ screen ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်စာသားကိုဖျက်ပစ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။
•, ရုရှား, အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်စပိန်, ဂရိ, တူရကီ, တရုတ်နှင့်ကိုရီးယားအပါအဝင် 60 + ဘာသာစကားများစာသားအသိအမှတ်ပြုမှု, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် (စက်ပေါ်ရှိအော့ဖ်လိုင်း) မပါဘဲ။
•အားလုံးလင့်များ, ဖုန်းနံပါတ်များ, အီးမေးလ်လိပ်စာများ, စာတိုက်လိပ်စာများကိုထုတ်ယူပြီးနောက်နှိပ်ဖြစ်လာ: သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးလိုက်ပါသို့မဟုတ်မြေပုံပေါ်တွင်လိပ်စာရှာတွေ့, link ကိုဖုန်းကို click နှိပ်နိုင်ပါတယ်။
• 100 + ဘာသာစကားများ (အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်ပါသည်) သို့အပြည့်အဝ-စာသားကိုဘာသာပြန်ချက်။
•အ clipboard ထံဖို့အသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်ဘာသာပြန်ထားသောစာသား Autocopy, ထိုစာသားကို-to-speech (၏ TTS) application များကျယ်လောင်စွာအဆိုပါ TextGrabber screen ပေါ်မှာကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖတျရှုနိုငျဒါ။
•စနစ်ခွဲဝေမှုမှတဆင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားဆို app ကိုမှရလဒ်များကိုမျှဝေပါ။
•အားလုံးဖမ်းဆီးရမိစာသားများ, သိမ်းဆည်းထား edited, ဖျက်ပစ်ဒါမှမဟုတ်မှတ်စုစာရင်းထဲတွင်ပေါင်းစည်းနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအခမဲ့ဗားရှင်းကြော်ငြာ-ထောက်ခံသည်နှင့်3စာသားကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ချက်ပေးသည်။
ABBYY TextGrabber နှင့်အတူသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်၏တစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူသင်လိုအပ်မဆိုပုံနှိပ်စာသားကိုကယ်တင်နှင့်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည်
• Labels: နဲ့ကောင်တာ
အကြံပြုချက်များ & လှည့်ကွက်
·အသိအမှတ်ပြုမှုမတိုင်မီ (ကတစ်ကြိမ်မှာသုံးအထိ) သင့်လျော်သောဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ
အသိအမှတ်ပြုမှုရလဒ်များကို unformatted စာသား (txt) အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ (ဥပမာ, DOCX, XLS) ပုံစံထိန်းသိမ်းနှင့်အတူစာအုပ်တွေသို့မဟုတ်ကြီးမားသော Multi-စာမျက်နှာစာရွက်စာတမ်းများစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလိုပါက ABBYY FineScanner ကြိုးစားကြည့်ပါ။
·ဘာသာပြန်စာပေ third-party ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကရလဒ်ကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်မရှိကြပါဘူး။
ABBYY TEXTGRABBER မဆို Print သတင်းအချက်အလက်များ, ဖျက်ပစ်ဖို့ဘာသာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်!
သငျသညျ ABBYY TextGrabber ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်စွန့်ခွာသွားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျနော်တို့အော့ဖ်လိုင်းအွန်လိုင်း + ဘာသာစကားများ 100 နှင့် 10 ဘာသာစကားများမှရီးရဲလ်အချိန်ဘာသာပြန်စာပေကဆက်ပြောသည်။ ဒီ app ဓာတ်ပုံနှင့်သီးနှံမပါဘဲကင်မရာ screen ပေါ်မှာမဆိုနောက်ခံပေါ်တွင်မည်သည့်အရောင်၏စာသားကိုဘာသာပြန်ပေးသည်။
App ကိုအလိုအလျှောက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသတ်မှတ်နှင့်ဒါသည်မှန်လျှင်, အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် 100 + ဘာသာစကားများသို့ Full-စာသားကိုဘာသာပြန်ချက်ကယ်နှုတ်ကအသုံးပြုသည်။
အင်တာနက် app ကိုမပါဘဲခရီးသွားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာအော့ဖ်လိုင်း, ဘာသာပြန်ချက်, ကို switch ။ ဒါဟာ 10 ဘာသာစကားများအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
TextGrabber အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Scan ကို & စာသားမှဓာတ်ပုံ Translate
40.27 ကို MB
FineScanner အိုင်အက်စ် - …
Voice Translate - …